War - Tallaabooyinka kahortagga giraanta cilad-dillaaca ee wiishka Tower iyo dayactirka
Talaabooyinka kahortaga giraanta cilad-darrada wiishka Tower ee iyo dayactirka
Farsamaynta dhalmada ee wiishka munaaraddu waxay inta badan ka kooban tahay qaadista xajinta, wadista gawaarida iyo taageerada sare iyo ka hoose. Iskuxidhka wiishka wiishka lagu sido ee geedi socodka shaqada inta badan ma noqon doono hawl hagaagsan oo buuquna wuu ka batay cilladda caadiga ah (qaylada aan caadiga ahayn). Qoraaga oo isku darsaday khibradiisa shaqo ee u gaarka ah kadhalista gawraca, farsamaynta gawraca iyo cilad bixinta dhalida siday u kala horreeyaan, habka wax soo saarka, baaritaanka isku imaatinka, dayactirka qalabka iyo dhinacyada kale ee fikradahooda iyo soo jeedintooda.
1.slewing shuruudaha marsho giraanta
Xidhiidhka iyo foorarsiga qalabka geerka ee hoos yimaada culeyska ugu dambeeya iyo daalka ayaa la xisaabiyay oo la xaqiijiyay iyadoo la raacayo ISO6336-1: 2006, ISO6336-2: 2006 iyo ISO6336-3: 2006 siday u kala horreeyaan. Sf waa 1.48 iyo nadiifinta mesh mesh ayaa loo habeeyay barta ugu sarreysa ee radial-ka oo ka baxsan wareegga garoonka. Nadiifinta ugu yar ee ilkaha ayaa caadi ahaan ah 0.03 ilaa 0.04x modulus, iyo nadiifinta mesh mesh ee qalabka pinion ee wareega oo dhan waxay u baahan tahay in dib loo hubiyo ka dib marka ugu dambeysa lagu xiro jeexitaanka.
2. Sleewing sita saliid gudaha
Isticmaalka maalinlaha ah waa inuu ahaadaa mid waqtigiisa ku habboon, waqtigiisa, sida ku cad buug-tilmaameedka qayb kasta sida ku xusan saliidda, sifaynta, qodobbada wareegga saliidda ee saliidda. U dhigmagiraan giraanta guud ahaan waa la buuxiyaa 100 saacadood oo kasta oo hawlgalka ah, giraanta duubista giraanta ayaa dib loo buuxiyaa 50 saacadood kasta, si loogu boorroodo, qoyaan badan, kala duwanaanta heerkulka sare ee deegaanka shaqada gaarka ahi waa inay soo gaabiyo wareegga saliidda. Shidaal kastaa waa inuu buuxiyo wadada ilaa inta saliiduhu ka baxayaan, iyagoo buuxinaya iyadoo si tartiib tartiib ah u wareegaya dhalmada si ay baruurta si siman u buuxsamaan. Adiga oo buuxinaya dayactirka saliida saliida, waxay yareyn kartaa khilaafka udhaxeeya labada lamaane, hoos u dhig heerka xirashada giraanta qalabka, sameynta filimka saliida ayaa sidoo kale ciyaari kara doorka giraanta nuugista shoogga, iyadoo laga takhalusi karo qeyb ka mid ah tamarta gariirka ee la soo saaray hawlgalka Intaas waxaa sii dheer, filimka saliidda saliidda waxay sidoo kale noqon kartaa mid sifeyn wanaagsan nadiifiya dusha sare ee khilaafaadka, ka hortagga daxalka, iyo baabi'inta saameynta ay ku leeyihiin walxaha birtu dusha sare ee khilaafaadka. Markaa si loo yareeyo buuqa ka dhex aloosan hawlgalka lana kordhiyo nolosha adeegga ee gaadhigu wax lagu gooyo.
Isku-xidhka isku-xidhka qalooca jeexjeexa iyo kor-u-qaadista qulqulka kore iyo hoose waxaa la saaray culeys garaaca wadnaha ah marka lagu daro preload-ka, taas oo sababi doonta in fallaadhihii la kala bixiyo ama dusha wadajirka ah la beddelo, taas oo keenaysa in boolalku kala baxaan. Bolt furitaanka wadajirka ah ee iskudhafka ahi ma gaadho kororka foorarsiga foorarsiga ee loo baahan yahay, jirka oo lagu rogo wareegga wareegga wareegga oo ballaaran, cirifka wadada ciriiriga xiriirka weyn, taasoo keentay dhaawaca qadka wadada. Magaalo waxay lahayd wiishka sare ee wiishka sare ee 'QTZ 25' oo rogmanaya shil, sababta tooska ah ayaa ah dhalista dhalashada iyo boolal qaloocinta sare ee xaaladaha aan la cayimin ee shaqada, taas oo keentay in koox kasta oo bool ahi markooda, oo si isdaba joog ah loo hoos dhigo wax ka badan xamuulkeeda. awoodda kooxda balka. Tani waxay keentay qaabdhismeedka sare ee munaaradda (oo leh dhalaalkeeda dhalashada) oo ka soo go'da dhismaha munaaraddii oo is rogrogtay. Qalabka isku xidhka ee isku xidhka oo adkeeya iyo xulashada heerka xoogoodu aad ayuu muhiim u yahay. Sidaa darteed, isku xidhka boolida isku xidhashada iyo xulashada heerka xoogoodu waa mid aad muhiim u ah.
4. Rakibaadda iyo Hawlgalka
Rakibaadda giraanta wax lagu garaaco waa in lagu xushaa xoog badan, handarraabbadeedda iyo lowsku waa inay u hoggaansamaan shuruudaha caadiga ah ee GB3098.1 iyo GB3098.2 oo ah mamnuucidda isticmaalka qalabka wax lagu dhaqo guga. Kahor intaadan adkeynin bolts-ka, waa in la sameeyaa qalabka wax lagu qiyaaso (hagaajinta dhinaca) si loo hubiyo in dhalashada iyo mesh meshku ay buuxinayso shuruudaha. Adkee biraha wax lagu dhejinayo waa inay ahaadaan 180 °, diyaaradda rakibida waa inay ahaataa mid nadiif ah oo siman, burrs ma leh, bir xiirashada iyo burburka kale, diyaaradda waa inay buuxisaa shuruudaha.
Wareegga wiishka wiishka lagu duulo ee hawlgalka inta badan sidoo kale wuxuu yeelan doonaa ilko jaban, markaa wiishka munaaradda ee hawlgalka sidoo kale waa inuu tixgeliyaa saameynta dabaysha ee giraanta dilitaanka, haddii in ka badan hawlgalka dabaysha ee la cayimay ama joojiyo hawlgalka ka dib markii wiishku uusan wareegi karin si xor ah dabaysha, tani waxay dhaawici kartaa qalabka iyo ka-qaybgalka dhalista wax-ku-oolka ah ama giraan giraanta, shil halis ah ayaa dhici doona. Marka wiishka munaaraddu rakibidda iyo hawlgalku waa inuu sameeyaa kormeer faahfaahsan.